WhatsApp wuxuu noqon doonaa mid isku dhufasho badan oo daruur aad u dhaqso badan | Wararka IPhone
WhatsApp waligeed heer ma gaadhin markay timaado muuqaalada in xafiiltankooda ay bixiyaan, taasi maahan illaa iyo hadda, Telegram iyo xitaa FB Messenger (oo isla shirkad ka wada tirsan) waxay isla mar ahaantaana wada shaqeeyaan aalado badanna aan lahayn farsamooyin duugoobay, asal ahaan maxaa yeelay waxay ku shaqeeyaan "daruuraha." Si kastaba ha noqotee, waxay umuuqataa in WhatsApp ay kudhowdahay soo qabashada.
Sida ku cad xog dhowaan la helay, WhatsApp waxay diyaarinaysaa daruur iyo nidaam hawlgal iskudhaf ah oo la mid ah Telegram oo dhawaan la bilaabi doono. Iyo si daacadnimo ah, ma sugi karo WhatsApp inay ugu dambayntii hirgeliso shaqooyinkan noo oggolaanaya inaan si dhakhso leh oo fudud ugu galno aalado kale.
Ayaa mar kale ku jirtay bogga WaBetaInfo halkaas oo lagu wadaagay macluumaadka ku saabsan astaamaha cusub ee WhatsApp. Awoodaani waxay horey u gaartay dadka isticmaala macruufka xaalada beta, si kastaba ha noqotee, waxaa loo heli doonaa macruufka iyo Android. Tani Waxay u oggolaan doontaa dadka isticmaala inay isku xiraan isla fadhiga xitaa isku mar qalab kala duwan oo aan ahayn sidii hore, in WhatsApp uu adeegsado taleefannada casriga ah ee loo yaqaan 'server smartphone' oo waxay ku celcelinaysaa waxyaabaha ku jira shaashadaha kale, laakiin dhab ahaan haddii aaladda mobiilku aysan helin fariimaha, kuma arki doonno PC ama Mac sidoo kale.
Tani waxay WhatsApp u dhowdahay iPad-ka iyo Mac-ga, iyagoo awood u leh inay ku rakibaan codsiyo madax-bannaan sidii aan horayba ugu sameyn jirnay Telegram, iyadoo la ilaalinayo wada-hadallo isku-dhafan iyo deg-deg ah daruuraha. Qeyb kale oo go'aan ah ayaa ah in sidan oo kale aan waligey u lumin doonin sheekadeena iyo sawiradayada maxaa yeelay waxay si joogto ah ugu sii jiri doonaan server-ka marka lagu daro aaladdayada. Xaqiiqdii tani waxay ahayd inay soo dhawaato ama goor dambe, iminkana waxaan dooneynaa inaan feejignaan dheeri ah yeelanno si aan isla markaaba awoodno inaan kugula socodsiino markii karti loo siiyo dhammaan dadka isticmaala, sidee loo soo dhaweynayaa WhatsApp-ka iPad-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » WhatsApp wuxuu noqon doonaa mid isweydaarsi iyo daruuraha si dhakhso leh
StayGo wuxuu badiyaa dekedaha laptop-kaaga ama iPad Pro